Iindlela eziThengiswayo zokuThengisa, uMceli mngeni kunye neMpumelelo | Martech Zone
UHolger Schulze kunye nebhlog yeNtengiso yeTekhnoloji benze uphando kubathengisi be-B2B kwi Uluntu lweNtengiso yeTekhnoloji ye-B2B kwi-LinkedIn.
Ndibuzile UTroy Burk, Umphathi omkhulu we-Right On Interactive- a iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa Echongwe njengenkokeli kolu shishino - ukunika ingxelo ngeziphumo zophando.
Olu phando lwenziwe kakuhle kwaye lubonelela ngeendlela ezifanelekileyo zendlela abathengisi abancinci be-B2B abasebenzisa ngayo ukuthengisa ngokuzenzekelayo. Kudos kuHolger kunye neqela elidibanise oku. Kwiimpendulo ezingama-909, uninzi lwabaphenduli bevela kwisoftware, ubuchwephesha obuphezulu kunye nentengiso kumashishini anabasebenzi abangaphantsi kwe-100. Kwiinkampani eziwela kolu luhlu siye sabona imikhwa efanayo, imiqobo kunye neenjongo. Ezi nkampani zisebenza nzima ukufumana abathengi abatsha, ngokukhawuleza okukhulu, kunye nohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo abasebenza kulo. Uninzi lujolise kwisizukulwane esikhokelayo, indleko yinto ebalulekileyo, kunye nemilinganiselo ye-ROI ngelishwa isekele impendulo yomkhankaso (ivula kwaye ucofe-uthinte).
Ukuzenzekelayo kwentengiso okwenziwe ngokufanelekileyo kulingana nembuyekezo enkulu yemali, ubudlelwane obuninzi bokuzibandakanya, ukuphucula ukusebenza ngaphakathi, kunye nokudala amava abathengi afanelekileyo kwaye anomvuzo.
Ukongeza, uTroy uphawule ukuba ngelixa abafumanayo bethetha ngohlahlo-lwabiwo mali kodwa ngaphezulu kwesiqingatha, iipesenti ezingama-57, balinganisa ukusebenza ngokuvula nangokucofa amaxabiso. Ngaxeshanye, iipesenti ezingama-37 zathi uhlahlo-lwabiwo mali yeyona ngxaki inkulu kwaye inethemba lezisombululo ezingabizi kakhulu. Kubongoza umbuzo wokuba abathengisi bayalinganisa ngokwenyani iqonga labo lokuzenzekelayo ngokuchanekileyo. Akufanele ulinganise naliphi na iqonga lokuthengisa elisekwe kwiindleko… kuya kufuneka ulinganise eyakho ukuthengisa utyalo-mali ngokusekwe kwimbuyekezo!
Ngumgca ongezantsi omnyama: Abamkeli bafuna ukukhokelela ngakumbi, isisombululo esinexabiso eliphantsi lokuthengisa, kunye nebhajethi ethe tyaba okanye eyehlayo yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Kwaye balinganisa impumelelo kumanqanaba avulekileyo kunye nokucofa.
tags: b2bUkuthengisa kwe-b2bukuzenzekela ngokuzenzekelayoIindleko zokuthengisa ezizenzekelayoukuthengisa utyalo-maliIxabiso lokuthengisa ngokuzenzekelayoukubuya kutyalo malibuyela kutyalo maliekunene kunxibelelwanoItrey burk